Mhando dze CNC milling machine | hardware yemahara
Imwe yemhando dzeCNC michina kana tikatarisa mabasa, kana mhando yebasa rinoitwa pachikamu, ndeiyi CNC milling michina. Vanogona kutaridzika zvakafanana cnc lathes, asi havana kufanana. Kunyange zvazvo maturusi emhando yekucheka achigonawo kushandiswa pa lathe pakuveza, hausi iwo muchina wakafanana. Semuenzaniso, CNC yekugaya muchina haifanire kutenderedza chikamu pakuchinja kukuru, inogona kuita basa rayo pane chimwe chezviso zvechikamu, nezvimwe.
Pano unogona ziva zvese zvese kuitira kuti usapokane, uye kunyange kuziva kuti ndezvipi zvakanakisa CNC milling muchina kugadzira tenzi kutenga kune bhizinesi rako kana yekushandisa hobby.
Mostics Kukwidziridza CNC... Ona maficha Ona kupiwa
CNC muchina wekugaya... Ona maficha Ona kupiwa
【Zvitsva... Ona maficha Ona kupiwa
CNC G-800 - Kugaya... Ona maficha Ona kupiwa
Zvakanakisa	Mostics Kukwidziridza CNC...
Unhu hwemutengo	CNC muchina wekugaya...
CNC G-800 - Kugaya...
1 Iyo yakanakisa CNC milling michina
1.1 Fetcoi 6040T 4 Axis CNC Milling Machine
1.2 Kaibrite 3040 3-Axis CNC Milling Machine
1.4 GUYX WMP250V Turning + Milling Machine
1.5 CNC milling muchina LDM4025
2 CNC muchina wekugaya
2.1 Chii chinonzi CNC kugaya?
2.2 zvikamu zvemuchina wekugaya
2.3 Mashandisiro anoita CNC milling muchina
2.5 Common Milling Operations
2.6 Mhando dze CNC milling machine
2.6.1 Maererano ne spindle orientation
2.6.2 Zvichienderana nehuwandu hwemaekisi
2.6.3 Zvinoenderana nezvinhu
2.6.4 CNC huni yekugaya muchina
2.6.5 simbi cnc milling muchina
2.7 CNC milling muchina mutengo
2.8 Zvakanakira zveNumerical Control Milling
3 Mhando dzemastrawberry
4 Mamwe mashoko
Iyo yakanakisa CNC milling michina
Kana iwe uchida kutanga mapurojekiti ako ekutanga nemuchina wekugaya weCNC, kana kuushandisa kuti ushandiswe nehunyanzvi, unofanirwa kuita izvi. recommendations:
Iwo emhando yepamusoro emakina ekugayo ekushandiswa kwemaindasitiri haawanzo kutengeswa muzvitoro zvepamhepo, asi pano ndakaedza kuunganidza mamwe ari kutengeswa neiyi nzira. Rangarira kuti mamwe emhando dzakanakisa dzemichina yekugaya yeCNC iSwiss Mikron, Bumotec&Starrag, Liechti, Willemin-Macodel, German Hermle, Alzmetall, Chiron, DMG, Spinner, STAMA, MAG, kana Japanese MoriSeiki, Okuma, Yamazaki Mazak, Makino, Toyoda, iyo yekuItaly FIDIA uye yeSpanish Danobat, kana iyo American Haas, Hardinge, Mazak, Grizzly Industries, nezvimwe.
Fetcoi 6040T 4 Axis CNC Milling Machine
CNC milling muchina une 4 mbezo,...
Iyi CNC milling muchina ndeye compact mudziyo, inokwanisa kubatana nePC kuburikidza ne USB tambo. Nayo unogona kushanda akawanda zvidimbu, zvose aluminium, mhangura, sirivheri, acrylic, ABS resin, PVC furo, huni, plywood uye MDF, nezvimwewo. Muchina wakakodzera wevanofarira kana hunyanzvi hwekushandisa, semuenzaniso kumisa diki musangano kumba. Pamusoro pezvo, ine VFD yakanyoroveswa nemvura, mota ine 1.5 kW,
Kaibrite 3040 3-Axis CNC Milling Machine
CNC 3040 milling muchina ne 3...
Iyi imwe CNC yekugaya muchina ine zvakafanana kune yapfuura, chete inongova nematemo matatu chete mune iyi kesi. Iyo zvakare inobatanidza nyore kuburikidza ne USB kune PC. Uye inogona kugadzirisa zvakasiyana-siyana zvezvinhu, zvakadai segirazi, huni, dombo, simbi, ETC. Iine mubhedha wakatsiga, uye ine simba spindle mota. Yakasimbiswa kuti irebe kuvimbika kwayo, uye zvakare ine saizi yakanyatso compact.
Iyi mhando ine 3-axis CNC milling muchina we acrylic plastiki, aruminiyamu, PVC, PCB, uye huni. Inonyanya hupfumi uye compact, uye zvinhu zvayo zvinovabvumira kuti vagare vakasununguka, kuitira kuti nzvimbo haisi dambudziko. Iyo ine kugadzikana kwakanaka, yakavhurika sosi GRBL software, zvakare inomhanya paArduino,
GUYX WMP250V Turning + Milling Machine
Iyi modhi yemuchina weCNC inotsigira mabasa ekugaya uye kutenderedza, ine chinhambwe pakati penzvimbo dze750 mm, MT4 tapered spindle yekutendeuka uye MT2 yekuchera nekugaya, inoshanduka inotenderera axis kumhanya, pakati pe50 ne2000 RPM, mota simba 750W yekutendeuka uye 600W. yekugaya, huremu hwemambure hunosvika 195 Kg, uye hukuru husina kunyanyokura zvichienzaniswa nemimwe michina.
CNC milling muchina LDM4025
Muchina mukuru wemaindasitiri wekugadzira ruzhinji. Muchina uyu wemhando yepamusoro, kuita uye nemazvo. Iine otomatiki lubrication system, mhando dzemhando, Mitsubishi M70A system, kutonhora kwemhepo, gantry uye kabhini yekuvharwa kugadzirisa, 4000 × 2500mm tafura yebasa, 2900mm kureba pakati pemakoramu, BT50 taper spindle, kusvika 8000 PRM, 22kW simba mota, kucheka kukurumidza kusvika ku7500 mm/min, kukurumidza kudyisa kukuru, kunyatsojeka, nezvimwe.
CNC muchina wekugaya
Kugaya haisi nzira itsva. Kubva pakusvika Industrial Revolution muzana remakore rechiXNUMX, akatanga rwendo apo murume nomuchina zvaizobatana pakugadzira. Zvisinei, zvishoma nezvishoma muchina uyu wanga uchitora zvinzvimbo uye mabasa ayo aimbokwanisa kuita munhu chete. Machina ekugaya anga aripo kwemakumi emakore, asi CNC kugaya chimwe chinhu chakanyanya kuitika. Nzira yekudzora zvese nekombuta, kuvandudza kumhanya, kurongeka uye kugadzirwa kwemhando iyi yekugadzira.
Chii chinonzi CNC kugaya?
Kugaya (milling cutter) inzira iyo mudziyo unozivikanwa semucheki wekugaya kugadzira maumbirwo kana zvimedu. Zvinoitwa na subtractive kugadzira, ndiko kuti, zvinopesana ne kuwedzera kugadzira. Mucheki wekugaya achatanga kana kubvisa chikamu chemidziyo kusvika kuveza kana kuveza zvaidiwa. Nekuuya kweCNC, makomputa anogona kudzora CNC milling muchina kuti uwane mhedzisiro inotarisirwa, pasina munhu anofanirwa kugadzirisa uye kufamba nemaoko.
Kuti unzwisise zvirinani mashandiro emuchina weCNC milling uye maitiro ekugaya, zvingave zvakakoshawo kunyora uye kunzwisisa zvimwe zve zvikamu zvikuru. Haasi ese mashini ekugaya anawo, sezvo anogona kusiyana kubva kune mumwe mugadziri kuenda kune mumwe, kana pakati pemhando. Nekudaro, iwo makuru ndeaya:
spindle: Ndiyo inochengeta mudziyo wekucheka uri panzvimbo yekugadziriswa kwechikamu.
Tool: inhengo inobviswa, uye ndiyo inoita kuvezwa pachimedu.
Panodhi yekudzora: ndiyo interface iyo mushandisi anogona kudzora muchina kana kutarisa mamwe ma paramita.
Column: Icho chikamu chikuru kana furemu inobata zvimwe zvikamu zvemuchina munzvimbo.
Chigaro: inogadziriswa kune mbiru yemuchina, uye inozorora patafura yebasa.
Mesa: ndiyo nheyo yemuchina umo chikamu chepamusoro chechigaro chiripo, apo chidimbu chinogadzirwa chinoiswa. Ichave zvakare ine clamping mudziyo kuitira kuti chidimbu chirege kufamba panguva yekuita.
hwaro: inzvimbo yekutsigira yemuchina pasi.
Refrigeration hurongwa: Inogona kuva nemhepo kana nemvura. Sezvo paine kukakavara pakati pechishandiso uye chishandiso panguva yekugaya, kupisa kwakawanda kunogadzirwa mune dzimwe nguva. Kuti uderedze tembiricha, unogona kushandisa mhepo kana mvura inogeza nzvimbo yebasa.
Mashandisiro anoita CNC milling muchina
Kufanana nemamwe muchina weCNC milling, zvese zvinotanga necomputer dhizaini inozopfuudzwa kumutauro unonzwisisika nemuchina weCNC uye ichaverenga iyi kodhi kudzora mafambiro chii chandinofanira kuita kuti ndiwane mhedzisiro yakafanana neiyo modhi yakagadzirwa nekombuta. Iyo drill ichabvisa zvinhu kubva kune dzimwe nzvimbo kusvika yawana chimiro chakakodzera, ukobvu, nezvimwe.
Mukati meiyo terminology muCNC milling, isu tine zvimwe zvikamu kana ma parameter aunofanirwa kuziva:
Speed: Zvinoreva kumhanya kunotenderedzwa nekucheka kana chigayo. Inopimwa mumarevolutions paminiti (RPM) uye inogona kurongwa kuti ienderane nezvinhu zvichagayiwa.
Zvokudya: ndiyo chinhambwe chinofambiswa neworkpiece kana kuchekwa kana kugayo pamuchinjiko (kana kutendeuka). Izvi zvinogonawo kurongwa uye zvinoenderana nemashoko acho.
kudzika kwekucheka: ndiyo chinhambwe chinofambiswa nechishandiso pamusoro pechikamu, uye zvakare chinoenderana nechinhu.
More parameters: ona pano
Pane mabasa akasiyana-siyana yekugaya iyo inogona kuitwa nerudzi urwu rweCNC michina. Zvichienderana nerudzi rwedare, makuru ndeaya:
face milling: iyo axis yekutenderera kwechishandiso ichave yakatarisana nechepamusoro pebasa rekushanda. Nzvimbo dzakafuratira dzichagadzirwa neichi chigayo uye chinoda makucheka ekugaya ane magumo akapinza pamuromo.
Plano: kana axis yekutenderera ichienderana nepamusoro pechikamu. Chishandiso chacho chine mipendero yekucheka padivi pese denderedzwa rekucheka, uye inogadzira slots, cavities, grooves.
Angular: Matemo ekutenderera kwechombo anoita kona nepamusoro pechidimbu. Inoshandiswa kugadzira chamfers, slots, dovetails, nezvimwe.
shape milling: iwo chaiwo anocheka milling kuti agadzire nzvimbo dzisina kujairika, semicircular contours, tambo, macurves, nezvimwe.
vamwe: kune zvakare mamwe ekugadzira magiya, kushanda panguva imwe chete pane akati wandei, nezvimwe.
Kune dzakawanda mhando dze CNC milling machine. Uye sezvazvaive zvakaita kune lathes nemamwe marudzi emakina, anogona kuverengerwa pachishandiswa akati wandei maitiro:
Maererano ne spindle orientation
Vertical: yakawanda yakawanda maererano nemachining sarudzo.
Horizontal: zviri nani kushanda nezvidimbu zvinorema uye refu.
Zvichienderana nehuwandu hwemaekisi
3 axis: iwo zvikamu zvine X axis (kuruboshwe kuenda kurudyi), Y axis (mberi uye kumashure) uye Z axis (kumusoro uye pasi), inobvumira 3D milling. Michina iyi ndiyo yakapfava, iri nyore kushandisa, uye ndiyo yakachipa. Nekudaro, haugone kuwana dzimwe nzvimbo dzechikamu chiri kugadzirwa, uye iyo geometry inogona kuwanikwa ichave isina kuoma.
5 axis: Muchina uyu wakaoma kupfuura wekare, uchiwedzera maviri ekuwedzera demo kuti uvandudze rusununguko rwekufamba. Neizvi, zvimwe zvikamu zvakaoma zvinowanikwa. Muchiitiko ichi, chikamu chichakwanisa kuita mafambiro anotenderera kuitira kuti chigadziro chigone kuwana zviri nani munzvimbo dzose. Pakati pezvakanakira inyaya yekubvisa iyo bhuku repositioning yechikamu, kugona kuburitsa mamwe akaomarara geometries, kunyatsojeka, uye yakatsetseka zvakanyanya. Kana zviri izvo zvisingabatsiri, pane mutengo, uye kuoma kukuru kwemuchina.
Kune akawanda zvinhu zvinogona kugadzirwa nemichina kana kugayiwa. Nekudaro, pane zvimwe zvirambidzo, sezvo izvo zvinhu zvinoda kuve neyakaomesesa kusimba kwesimba, kupisa kupisa, kuoma, uye kugera simba zvimiro. Pakati pezvinhu zvinogona kusiyaniswa:
CNC huni yekugaya muchina
Iwo CNC milling michina inokwanisa kushanda nehuni, ese ari maviri softwood, senge hardwood, pamwe neplywood kana MDF panels. Pakati pehuni dzechisikigo, panogona kuve nematanda akadai sepaini, oak, walnut, maorivhi, uye refu etc. Imwe neimwe ine chaiyo yavanoda maererano nemilling paramita. Zvinowanzozivikanwa zvakanyanya mukuveza kana maindasitiri akazvipira kune huni.
simbi cnc milling muchina
Simbi mastrawberries ari pakati peanonyanya kufarirwa padanho reindasitiri, nekuti kune akawanda mashandisirwo ezvishandiso izvi. Kubva pamahwindo, magonhi, uye zvimwe zvinhu zvealuminium, kuburikidza nesimbi yekuvaka, yemotokari chikamu, nezvimwewo, kune zvimwe zvakawanda zvinoshandiswa. Zvakare, simbi dzakasiyana-siyana uye alloys zvinogona kushandiswa pano, asi inonyanya kufarirwa ndeye simbi, ndarira, mhangura, titanium uye bhuronzi.
Kune zvakare CNC milling michina inogona kushanda nemapurasitiki polymers, senge ABS, PEEK, polycarbonate (PC), naironi, nezvimwe. Zvechokwadi, kune vanocheka kune zvimwe zvinhu zvakadai se girazi, elastomers, dombo, marble, nezvimwe. Pakazara pane zvinhu zvinopfuura makumi mashanu zvinogona kugadziriswa.
CNC milling muchina mutengo
ari cnc milling muchina mitengo vanogona kusiyana. Kune mimwe michina yekugaya inogona kutengeswa nemazana mashoma emaeuro, inokwanisika zvakanyanya kunyangwe kushandiswa kwakavanzika. Mamwe maindasitiri ekugadzirwa kwakawanda kana kufambira mberi zvakanyanya anogona kuita zviuru zvemaeuro. Nokudaro, hapana chiyero chemutengo chaiwo. Kunyangwe pakati pemhando dzine maitiro akafanana, panogona kuve nemusiyano mukuru pakati pemhando.
Zvakanakira zveNumerical Control Milling
CNC milling ine kubatsirwa kukuru yewekishopu kana kambani. Semuenzaniso, mamwe emabhenefiti akanyanya ndeaya:
Kubudirira: inowedzera kukurumidza kugadzira, uye inoderedza mari.
Kukwanisika: inobvumira kugadzira kubva kuzvidimbu zvishoma kuti iwedzere kugadzirwa kwakakura, kugadzira kuwanda uye kubvumira zvidimbu zvese zvakafanana.
Kururama- Mimwe michina ndeyechokwadi kusvika padiki segumi zvemillimeter, saka vanozokwanisa kugadzira zvikamu zvemhando yepamusoro.
Versatility: vanogona kugadzira marudzi ese ezvimiro (chamfers, cavities, slots, threads, mazino, ...), uye unogona kukurumidza kuchinja basa kuti ribudise chikamu chakasiyana pasina nguva.
Pakati pemaindasitiri anoshandisa mhando yemichina iyi aerospace, magetsi, mota, marobhoti, kuvaka, kurapwa, chikafu, kugadzira fenicha, nezvimwe.
CNC milling zvakare ine Zvimwe zvinokanganisa:
Mutengo weiyo yakaoma geometries: zvichienderana nejiometri, mutengo unogona kuwedzera uye nguva inodiwa zvakare.
Zvirambidzo kana ganhuriro: michina iyi inogona chete kushanda neakananga chikamu zviyero maererano nehurefu nehupamhi.
Zvimiro zvisingagoni kugayiwa: Ivo havagone kugadzira mamwe maficha, senge maburi akakomberedzwa, yakatwasuka yemukati mipendero, madziro asingasviki 0.5mm, nezvimwe. Nokuda kweizvi, mamwe marudzi emichina aizodiwa.
kutambisa zvinhu: Mukugadzirisa maitiro ekugadzira, huwandu hwakawanda hwezvinhu hunobviswa, huchibudisa tsvina yakawanda. Chikamu chete chevhavha yese yemhandara ndicho chichashandiswa. Mazhinji emachipisi anokonzeresa anogona kushandiswazve kana kushandiswa zvakare. Semuenzaniso, simbi inogona kunyungudutswa pasi, mamwe mapurasitiki anodzokororwa zvakare, kana huni inogona kushandiswa kune mamwe maindasitiri (bepa, mafirita, biomass, nezvimwewo).
Pane marudzi akasiyana-siyana estrawberries iyo inogona kushandiswa sechishandiso cheiyi CNC michina. Pakati pezvinonyanya kuzivikanwa ndezvi:
tungsten carbide burs: dzakagadzirwa nechinhu ichi chakanyanya kuoma uye chisingachinji. Kunyange zvazvo ichidhura, inogona kushandiswa kune zvinhu zvakaoma, kusanganisira simbi dzakadai sealuminium. Kufanana nemastrawberries akawanda, anogona kuva 1, 2, 3, ... miromo.
High speed simbi kana HSS milling cutters: dzakaoma uye dzakachipa, dzakajairika. Inoshandiswa mukugaya zvinhu zvakapfava zvishoma.
Yakatwasuka milling cutter yealuminium: inogona kugadzirwa ne tungsten carbide, asi ine yakasarudzika geometry, sezvo helix ine mipendero yekucheka iri 45º kubatsira zvirinani kuburitsa machipisi. Yakanakira kesi uko machipisi akakura uye anowanzo kunamatira pamwechete.
roughing cutter: Iine mazino pamucheto wekucheka uye inoshandiswa pakutanga roughing yezvinhu. Semuenzaniso, kubvisa zvidimbu zvekutanga zvehuni yehuni, nezvimwewo.
mastrawberries ane radius: mipendero inogona kutemwa muchidimbu kana concave maumbirwo anogona kuitwa.
T-slot cutter: kugadzira iyo yakakurumbira T-yakaumbwa slots, senge iyo iri pamatafura emamwe CNC michina.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Mahara emahara » Cnc » Mhando dze CNC milling machine
JST connector: zvese zvaunoda kuziva